"Taqwadu maaha Habeenkii in la Cibaadaysto, Maalintiina La Soomo Inata U Dhexeysana Xaaraanta Aad Walaaqato," Cumar Binu Cabdicasiis RC - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
“Taqwadu maaha Habeenkii in la Cibaadaysto, Maalintiina La Soomo Inata U Dhexeysana Xaaraanta Aad Walaaqato,” Cumar Binu Cabdicasiis RC
Hargeysa(ANN)-Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir oo ka mid ah Culimada Somaliland, ayaa ugu baaqay bulshada in kelmada Allah ka cabsigu tahay kelmad Ilaahay SW uu faray Gaal iyo Islaam-ba sida aayad quraanka kariimka Ilaahay SW inoogu sheegay ‘Dadyahow Illaahay SW ka cabsada.
Sheekh Maxamed oo ka hadlayey khudbadii Jimcaha maanta Masjidka uu Khadiibka ka yahay ee Hargeysa, wuxuu kusoo qaatay muhiimada Allah ka cabsiga ayaa sheegay in loo baahan yahay ogaanshiyaha macnaha Alle ka cabsiga, mudnaanta uu ku leeyahay sharciga iyo midhaha laga goosanayo, waxaanu yidhi,
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in marka la soo uruuriyo macnaha Taqwada ay noqonayso in layska riixo cadaab Illaahay SW, laguna riixo daacada iyo cibaadada, kana riixo naftiisa, isagoo doonaya raali-ahaanshaha Ilaahay SW.
Mar uu ka hadlayey ahmiyada Allah ka cabsiga iyo martabada ay shareecada Islaamku ku sifaysay Sheekh Maxamed ayaa yidhi kalmada Taqwadu waa kalmada Ikhlaaska,
Nebi Maxamed NNKH iyo asxaabtiisi waxay ku adkaysteen, Ilaahay SW u sahlay kelmada Allah ka cabsiga, oo ku hdawaaqeen, kuna noolaayeen.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in kelmada Alle ka cabsigu tahay kelmad Illaahay SW uu faray Gaal iyo Islaam-ba sida aayad quraanka kariimka Illaahay SW inoogu sheegay ‘Dadyahow Ilaahay SW ka cabsada.
Kelmada Alle ka cabsiga miisaankeeda iyo inaan la dhaafi Karin waxa inoo iftiiminaya Nebi walba CS ama Rasuul walba CS markuu ummadiisa u yimaado waa halkuu casharka uga bilaabayey, sida Ilaahay SW aayad quraanka inoogu sheegay ‘idinka iyo ummadahii idiinka horeeyey ee kutubta la siiyey Allah ka cabsiga ayaa la farayey, wax cidna laga dhaafay ma ahayn’.
Miisaanka Allah ka cabsigu shareecada Islaamka dhexdeeda ku leeyahay waxa caddaynaya waa xikmada aynu u cibaadaysanayno, oo qofku markuu caabdudka noqdo waxuu gaadhayaa derejada laan-dheere-nimada ee Taqiga, sida Ilaahay SW aayad quraanka inoogu sheegay, ‘Dadyahow Rabigiina caabuda, dadkii horena isagaa u Rabbi ahaa, si aad u cabsataan’ cibaadadaa ayaad cabsida ku helaysaan.
“Aad waxaynu ugu ordeynaa ee Illaahay SW u jecelnahay, ee diintiisa u jecelnahay, ee Rasuulkiisa NNKH u jecelnahay waa in Illaahay SW inna jeclaado. Jacaylku waa wax weyn, madaxdu waxay u ordeysaa shacabku ha idin jeclaado, shacabku waxay u ordayaan madaxdu ha idin jeclaato, Gabadhu waxay u ordeysaa Odeygaagu ha ku jeclaado, jacayladaa oo dhan ka ka muhiimsan ee aynu u ordeyno waa in Illaahay SW inna jeclaado, markuu Illaahay ku jeclaadana qof kaloo kuu cadhooda waxba kuma yeelayo.
Naxariista Illaahay SW aynu baadigoobayno waxa lagu helaa Allah ka cabsiga sida Ilaahay SW quraanka kariimka ugu cadeeyey, taasoo laba boqol iyo dheeraad aayadood ku soo arooreen ‘Naxariistaydu shay walba way ka balaadhatay, waxaanan aakhiro ku gooni yeeli doonaa kuwa iga cabsada’.
Sheekh Maxamed ayaa bulshada ku baraarujiyey in Xaaraanta ummadu u badheedho loo baahan yahay in Allah ka cabsigu ka joojiyo, waajibka la fudedsaday waa in Alle ka cabsigu kugu baraarujiyo, dulmiga iyo xad-gudubka waa in Allah ka cabsigu innaga joojiyaa, Allah ka cabsiga waa inaynu nafaheena, caruurteena iyo bulshadeena ku tarbiyadeyno. Ilaahay SW ayeynu weydiisanayna ain qalbigeena ku weyneeyo Allah ka cabsiga, Amen.